उद्योग विभागमा ट्रेडमार्क चोरी विरूद्ध ४६ वटा उजुरी परेका छन्। चालू आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को दुई महिनाको अन्तरालमा सो सङ्ख्यामा उजुरी परेको हो। उद्योग विभागका अनुसार भारत, स्पेन, बेलायत , श्रीलङ्का, जापान, अमेरिका लगायतका विकसित राष्ट्रले नेपाललाई ट्रेडमार्क चोरीको उजुरी हालेको छ। त्यस्तै नेपाल केही उद्योगले नेपाली उद्योगलाई पनि ट्रेडमार्क चोरी गरेको उजुरी हालेको छ। विभागको तथ्याङ्क अनुसार स्पेनको जारा भन्ने कम्पनीले नेपालको पाश्ता कम्पनीलाई लोगो चोरेको उजुरी हालेको छ। एसियन पेन्ट कम्पनीको नेपालको रिलायन्स पेन्टलाई लोगो चोरी विरूद्ध उजुरी परेको छ। त्यस्तै श्रीलङ्काको मेरिज डेर्फनान्डो एण्ड सन्स कम्पनीले नेपाल…
काठमाडौँ । नेपाल आयल निगमले खाना पकाउने एलपी ग्यासको मूल्य घटाए पनि व्यापारीले भने पुरानै मूल्यमा बिक्री गरेको पाइएको छ । उपभोक्ताको गुनासो आएपछि निगमले बजार अनुगमन गरेको थियो । अनुगमनका क्रममा पुरानै मूल्यमा बिक्री भएको पाइएको नेपाल आयल निगमले जनाएको छ । खुद्रा पसलले ग्यासको मूल्य नघटाए निगमले कारबाही गर्ने चेतावनीसहितको विज्ञप्ति सार्वजनिक गरेको छ । निगमले असोज ३ गते निर्धारण गरेको मूल्यअनुसार बिक्री नगरिए कानुनबमोजिम कडा कारबाही गरिने निगमका प्रवक्ता वीरेन्द्र गोइतको बताउनुभयो । चाडवर्पका बेला उपभोक्तालाई राहत हुने आशयले मूल्य घटाइएको तर व्यापारीबाट त्यसको कार्यान्वयन नभएको सुन्नमा…
काठमाडौं- तपाईं वैदेशिक रोजगारीबाट दशैँमा घर फर्कँदा आफूलाई आवश्यक र मन परेका सामग्री लिएर फर्कँदै हुनुहुन्छ? यदि हो भने त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलबाट कुनकुन सामग्री बिना भन्सार ल्याउन पाइन्छ भनेर बुझ्दा सजिलो पर्छ। यसका साथै कुन सामानमा ल्याउन कति भन्सार लाग्छ भन्ने पनि बुझ्नुभयो भने अझ सहज हुन्छ। नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयको निजी गुन्टा, झिटी, भारीसम्बन्धी व्यवस्था अनुसार वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका व्यक्तिले उल्लिखित सबै वा कुनै मालसामान ल्याउँदा भन्सार महसुल पूर्ण छुट हुने व्यवस्था गरिएको छ। (क) लुगाफाटा, बरबिछ्यौना, घर गृहस्थीका पुराना सामान। (ख) औषधी, उपचार गराई फर्केका बिरामीले ल्याएका औषधि।…
८ असोज, काठमाडौं । बैंकिङ क्षेत्रमा पछिल्लो समय सिस्टम हृयाकिङको विषय चर्चामा छ । चिनियाँ हृयाकरहरुले एटिएम हृयाक गरेर करोडौं रकम निकालेको विषय सेलाउन नपाउदै पुनः कृषि विकास बैंक ह्याक भएको घटना सार्वजनिक भएको छ । कृषि विकास बैंकको सिस्टम हृयाक गरेर ठूलो रकम निकालिएको छ । प्रारम्भिक अनुसन्धानमा १ करोड ५६ लाख रुपैयाँ निकालिएको बुझिएको छ । राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता लक्ष्मीप्रपन्न निरौलाले सिस्टम हृयाक गरेर रकम निकालिएको पुष्टि गरे । उनका अनुसार विगतको भन्दा फरक तरिका अपनाएर रकम निकालिएको छ । यसअघि नेपालमा २ किसिमका हृयाक भएका थिए ।…
September 24, 2019 September 24, 2019 Purakhabar News
काठमाडौं : पाँच सय, एक हजार र दुई हजारका भारतीय नोट नेपालमा चल्दैनन्। यसले गर्दा सीमा क्षेत्रमा समस्या छ। त्यसमाथि दसैंलगायत चाडपर्व मान्न भारतबाट फर्किन थालेका नेपालीलाई भारु साट्न सास्ती भएको छ। भारतीय नोट सटही नहुँदा समस्या हुने गरेको गृहसचिव प्रेमकुमार राईले बताएका छन्। ‘ठूला भारतीय नोटबारे राष्ट्र बैंक मौन छ। लिने भए लिने भन्नुपर्‍यो। नलिने भए पनि भन्नुपर्छ’, प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समिति बैठकमा सोमबार गृहसचिव राईले भने, ‘भारतमा चल्दा नेपालमा पनि चलाउनुपर्छ। नभए जनताले अनायसै दुःख पाउँछन्।’ समिति सभापति शशि श्रेष्ठले राष्ट्र बैंकको ‘दोधारे नीति’बाट जनताले दुःख पाउन…
आजबाट परिवर्तित सयको नोट चल्तीमा आउँदै
काठमाडौं । आजबाट फरक खालको सय रुपैयाँको नोट प्रचलनमा ल्याइने भएको छ । आकार, प्रकार तथा रंगमा संकेत पहिलेकै भएपनि नोटमा राखिएका चित्र तथा नक्साहरु परिवर्तन गरिएको नोट प्रचलनमा ल्याईने भएको नेपाल राष्ट्रबैंकले जनाएको छ । नोटको बायाँतर्फ भागमा सगरमाथाको चित्र, मध्ये भागमा नेपालको नक्सा, अशोक स्तम्भको चित्रका साथै लुम्बिनी द बर्थ प्लेस अफ लड बुद्ध अग्रेजीमा लेखिएको हुनेछ । अहिलेलाई यो नोट ३ करोड थान छपाईएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
काठमाडाैं, ६ असाेज : मेडिकल कलेजहरूले अवैध ढंगले असुलेको ३९ करोड रुपैयाँ फिर्ता गर्न आनाकानी गरेपछि सरकारले कारबाहीको दायरामा ल्याउने भएको छ । तोकिएभन्दा १३ लाख रुपैयाँ बढी लिएको पाइएपछि सरकारले कारबाहीको दायरामा ल्याउन तयारी थालेको हो । चितवन मेडिकल कलेज, किस्ट कलेज, युनिभर्सल मेडिकल कलेज र नेसनल मेडिकल कलेजले तोकिएभन्दा बढी शुल्क लिएको पीडित विद्यार्थीको गुनासो छ । मेडिकल कलेजहरूले बढी असुल गरेको ३९ करोड रुपैयाँ फिर्ता गर्न बाँकी रहेको विद्यार्थी संघर्ष समितिले जनाएको छ । अवैध ढंगले असुलिएको शुल्क फिर्ता गर्न सरकारले एक महिनाको अल्टिमेटम दिएको छ ।…
रवीन्द्र अधिकारीको निधनपछि किन बाँडियो यति धेरै पैसा ?
September 23, 2019 September 23, 2019 Purakhabar News
काठमाण्डु, ६ असोज– प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय सम्हालेका बेला २६ करोड ३५ लाख रुपैयाँ बाँडिएको छ । मन्त्रालयअन्तर्गतको संस्कृति, प्रवद्र्धन कार्यक्रम शीर्षकमा प्रधानमन्त्रीले यसरी रकम वितरण गरेका हुन् । तत्कालीन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारी अधिकारीको फागुन दोस्रो साता निधन भएसँगै प्रधानमन्त्री ओलीले यस मन्त्रालय सम्हालेका थिए । मन्त्रालयमा राज्यमन्त्री रहे पनि उनलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको थिएन । गत साउन १५ मा योगेश भट्टराई मन्त्री भएसँगै मन्त्रालयको नेतृत्व प्रधानमन्त्रीले छाडेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीको अग्रसरतमा ५२ संस्था र प्रतिष्ठानलाई २६ करोड ३५ लाख रुपैयाँ वितरण गरेको हो…
खोलाको जग्गा धितो राखेर ५ करोड ऋण ! बैंक अफ काठमाडौंका पूर्व कार्यकारी अधिकृत सहित ११ फक्रउ
बिर्तामोड / बैंककै कर्मचारीसंगको मिलेमत्तोमा एक व्यक्तिले बगिरहेको खोलाको जग्गा धितो राखेर बैंकलाई नै लाखौं रकम हानी नोक्सानी पु¥याएको तथ्य खेलेको छ ।झापाको कनकाई नगरपालिका भएर बग्ने विरिङ खोलाको जग्गा बैंकमा धितो राखेर झण्डै पाँच करोड रुपैयाँ ऋण लिएको र बैंकलाई व्याज समेत नतिरेपछि प्रहरीले वैंक अफ काठमाडौंका पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृतसहित ११ जनालाई पक्राउ गरेसंगै यस्तो तथ्य खुलेको हो । झापाको साविक घैलाडुब्बा बजार पश्चिम भएर बगिरहेको विरिङ खोला नै धितो राखेर ऋण दिएको आरोपपमा बैंकका पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत अजय श्रेष्ठ र ऋणी सुरेन्द्र श्रेष्ठसहित बैंकका पूर्वकर्मचारी र केही बहालवाला…
५ भदौं, काठमाडौं । दशैेंमा नयाँ नाेट वितरण बन्द गर्ने याेजना राष्ट्र बैंकले बनाएको छ । वार्षिक करोडौं रकम खर्चिएर छापिएको नाेट दशैंमा प्रयोग गर्दा आयु छाेटाे भएको भन्दै राष्ट्र बैंकले यस्ताे तयारी गरेको हाे । राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता लक्ष्मी प्रपन्न निराैलाले दशैमा नयाँ नाेट वितरण गर्दा नाेटकाे हिफाजत नहुने र नाेट बिग्रिंदा देशलाई नै ठूलाे धनराशि क्षति हुने गरेकोे भन्दै बन्द गर्ने याेजना बनाइएको बताए । वर्षमा ३ अर्बमाथि नाेट छपाईमैं खर्च हुने गरेको प्रवक्ता निराैलाले जानकारी दिए । ‘दशैंमा अविर लगाउने, भिजाउने जस्ता कामले नाेट विग्रने गरेका छन्,…